ဇန္နဝါရီလ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇန္နဝါရီလ 2019
နေအိမ် > ဇန္နဝါရီလ 2019
စာဖတ်ချိန်:2မိနစ်များ အင်တာနက်ကိုနေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်. အင်တာနက်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းထားပြီးကျနော်တို့မရှိတော့အင်တာနက်ကိုမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်မပြောတတ်တောင်မှအဖြစ်. လက်တွေ့မပါသည့်နည်းပညာအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်နေဆဲသောငါတို့ဘဝတွေကို၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်အင်တာနက်ရှိပါတယ်. This has especially been a…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်! အဆုံးမဲ့သောနေရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများ, သငျသညျအနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလွဲချော်ပါတယ်တူသောနေဆဲခံစားရနိုင်ကြောင်း. ၎င်းသည်ခရီးသွားအမှားများကျူးလွန်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်, and missing out on…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဂျီနိုအာ, ရောမမြို့နှင့် Florence ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရာဖြစ်ပါသည်, အီတလီနိုင်ငံရဲ့ Tuscany ဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်, are popular tourist destinations and hence the route from Genoa to Florence is popular and frequently traveled route andadistance that can be communicated with ease. ဂျီနိုအာ…